यसरी भएको छ 'सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग' | मेरो कलम
– अव कोहि साथीभाई नभएपनी दिन काट्न मुस्किल छैन । कतै दायाँवायाँ नहल्ल्किन मुर्ती भएरै कम्प्युट चलाईरहन सक्छौ, समाजिक सञ्जालमा टिकी रहन सक्छौ । यति प्रिय साथी भएको छ कि खाना खान र समयको ख्याल नै गर्न विर्सने भईसकिएको छ । आजभन्दा चार पाचँ वर्ष पहिल्यकै मात्र कुरा गर्ने हो भनेपनी कुनै जमातमाझ आफु र आफ्ना भनाई पुराउन रेडियो,टिभी पत्रपत्रिका लगायतमा छाउनै पथ्र्यो, अव भने त्यस्ता दिन गए, सामाजिक सञ्जालकै कारण समय र परिस्थित उथलपुथल भएको छ । हसज रुपमै विश्वसगँ जोडिन सकिएको छ । काम गर्ने र देखाउने स्थान वनेको छ सामाजिक सञ्जाल ।
उपयोग गर्नेहरुले त श्रीखण्ड वनाएकै छन् तर केहि यस्ता जमातहरु छन् जसले खुर्पाको विड सम्झेका छन् र दुरुपयोगमाथी दुरुपयोग गरिरहेका छन् । थाईल्याण्डमा वस्दै आएका पुर्व युवराज पारस शाह अस्वस्थ रहेको समाचार केहि हप्ता अघि मात्रै वाहिर आएको थियो । अचेत भए, ~ होश खुल्न सकेको छैन,~ उपचार कठिन हुदै गईरहेको छ, लगायतका यस्ता खवरहरु । सामाजिक सञ्जालमा पनी छाईरहे । तर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहाल निर्णयक हुदै सामाजिक सञ्जालमा छाए । उनले फेसवुकमा यसो भन्दै स्टाटस र फोटो अपलोड गरे ~ “पारस शाहप्रति हार्दिक श्रदान्जली । हिजो उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । मर्ने वेला पुलिसको तारिख धाउदा धाउदै अल्पायुमै ज्यान गुमाउनु परेको छ ।”
उनले अपलोड गरेको फोटो र स्टाटसले सवैका टाईमलाईन छोपियो । पासर शाहको मृत्यु भईसकेको रैछ,फेसवुकवाट थाहा पाएको भन्नेहरु धेरै भेटिए । । “पारस शाहको मृत्युको श्रोत भए प्रकाश दाहाल ।”
तर हालै पुर्व युवराज पारस शाह अस्पतालवाट डिस्चार्ज भएर सुधार गृहमा गएका छन् भन्ने समाचार नेपाली मिडियावाटै सुनिएको छ । आखिरिमा प्रकाश दाहाल नै पङगु भएनन त ?
तपाईले याद गर्नुभएका छ या छैन फेसवुक लाईक पेजहरुले पनी सामाजिक सञ्जालको धेरैभन्दा धेरै दुरुपयोग गरेका छन् । गुगलवाट डाउनलोड गरिएका अनेक अश्लिल फोटोहरु फेसवुकमा अपलोड गर्दै लाईक र कमेन्ट मागिरहेका हुन्छन् । अश्लिल भ्रमात्मक स्टाटस अपलोड गरिरहेका हुन्छन् । निकै दयनिय फोटो अपलोड गरिएको हुन्छ त्यो सत्य हो या अभिनय थाहा हुन्न त्यसमाथीपनी लाईक र कमेन्ट मागिरहेका हुन्छन् । जस्तो कि खान नपाएर भिख मागेजस्तो ।
कसले चलाउछ त्यस्ता पेजहरु ? आधिकारिक सघंसस्था,व्यक्ति केहि थाहा हुन्न । तरपनी तिनै पेजलाई राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को समाचार झै मानेर सेयर र कमेन्ट गर्ने काम भईरहेको हुन्छ ।
मलेशिया घटनाले पनी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग ह्वात्तै वढेको छ । दुई समुहविचको झडपमा परी ६ जना नेपालीको मृत्यु भएको समाचार आयो । पछि ए हैन रहेछ दुई जना चै सिकिस्त घाईते भएको भन्ने समाचार छायो । तर एकाथरी समुह हैन १५ जनाको चै मृत्यु भएको भनेर हल्ला फिजाईरहेको छ । अधिकाशं लुकेर अश्लिल व्लग तथा बेवसाईट चलाउनेहरुले नै यस्ता अफवाह हल्ला फिजाउने काम गरिरहेका छन् । वर्षौवर्ष अघि अफ्रिकामा भएका हिशांत्मक र प्राकृतिक प्रकोकका फोटोहरु मलेशिया घटनाकै हुन् भनेर ठोकुवा गर्दै सेयर गर्ने काम भईरहेको छ ।
ल यो तस्विर हेर्नुस् करिव ३ वर्ष अघि अष्ट्रेलियावाट flicker मा अपलोड भएको फोटोलाई फोटोशपको कमालले नेपाली नै हुन् भनेर पुष्ठि गरिएको छ । आधिकारीक श्रोत यीनै फेसवुक लाईक पेज र साईड भएका छन् । अनि यस्तै पेज तथा साईट पछिपछि छन्, भेडाजस्ता नेपाली फेसवुक प्रयोगकर्ता । (तस्विर खोजी:नेपाली व्लगर उमेश श्रेष्ठ)
यस्तो घटनै भएको छैन,फेसवुकमा अपलोड भएको फोटो र भिडियोको पछाडी नलाग्न भनेर मलेशिया स्थित नेपाली दुतावासले त विज्ञप्ती नै निकालेको छ । पढ्नुस्
यसरी पनी फेसवुकलाई प्रयोग गरौ न । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा कार्यरत जनकराज भट्टले फेसवुक प्रयोगकर्तालाई यसरी अनुरोध गरेका छन् । “मलेसिया घटना भनेर अनावयक फोटो शेयर गरेर उफ्रेर या कुनै मुर्ख बिद्वता देखाएर मलेसियामा रहेका दाजुभाईहरुलाई पर्नसक्ने असरका बारेमा सचेत होऔँ । अनावश्यक हल्ला फैलाएर भएका ईराक घटना जस्ता घटनाले बेफाईदा पनि हामिलाई नै हुन्छ । मुर्ख जस्तो एकोहोरो उफ्रिनु कराउनु अघी सत्य वुझौ । बेबकुफीले फाईदा कसैलाई गदैन । सोचौं । “
कसैगरी फेसवुकमा त्यस्ता हिंशात्मक फेटो सेयर हुन छोडेनन भने यसो पनी गर्ने होकि ? ईक्बेल एक्सेसमा कार्यरत पवन न्यौपानेले फेसवुकमा यस्तो लेखेका छन् । “फेसबुक मित्रको लागी जारी : हैटीको हो हाईन वा मेलसियाको हो होईन भनेर विभत्स तस्विर शेयर गर्ने काम वन्द गरौ । नत्र सिधै अनफ्रेण्ड गर्न वाध्य हुईनेछ ।”
सामाजिक सञ्जालको पहुच र शक्ति ठुलो छ । तपाईको कुनै एउटा स्टाटस/ट्वीटले ठुलै क्षती र हानी पनी हुन सक्छ । फेसवुकमा फोटो ट्याग,सेयर तथा अपलोड र ट्वीट गर्नुपुर्व यी कुराहरुमा ध्यान दिनुस् :
१ रिस उठेको समयमा स्टाटस/ट्वीट अपलोड नगर्नुस् ।
२.मादक पदार्थ लगायत नशालु पदार्थ सेवन गरेको समयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्नुस् ।
३ स्टाटस अपलोड,ट्याग तथा सेयर गर्दैगर्दा सोच्नुस् , कतै मेरै कारणले त अरुलाई असर गदैन ?
४ सोसिएल मिडिया कसरी प्रयोग गर्ने ? निति नियम के कस्ता छन् पढ्नुस् ।
१० सुन्दर फेसवुक कभर फोटो
Nepali March 17, 2013
Amar Bhattarai April 1, 2013 Log in to Reply
यस्तै भएर फेसबुक ४ पटक डीएक्टिभेट गरिसकेँ..
नीराजन शिरीष April 10, 2013 Log in to Reply
कुरा मुनासिव हो गुरू । तर नम्बर २ मा अलिकति गल्ती भएजस्तो छ हिहिहि
Hari Prasad Manandhar April 10, 2013 Log in to Reply
यस्तै हो हजुर जान्नेलार्इ श्रीखण्ड नजान्नेलार्इ खुर्पाको बिँड ।
SB Gautam April 26, 2013 Log in to Reply
मैले पनी केहि पटक फेसवुक डीएक्टिभेट गरको थिए अमर जी । खुर्पाको विड वनाउन तपाई हामीले दिनहुन्न हरी सर, यस्ता विषयमा सचेत गराउन आवश्यक छ । निराजन गुरु २ नम्वरमा त झन तलमाथी गर्ने मिल्दैन 🙂 प्रतिक्रिया दिनभएकोमा एकमुष्ट धन्यवाद ।